Shariif iyo Kheyre oo mar kale ka careysiiyay dadka reer Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Shariif iyo Kheyre oo mar kale ka careysiiyay dadka reer Muqdisho
Munaasabadda ay xalay diideen in ay ka qeyb galaan, waxaa sidoo kale lagu soo dhaweynayay mowqifka uu qaatay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, ee ku aaddan in la saxo khaladaadka doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre, ayaa mar kale diiday ka qeyb galka Munaasabad xalay ka dhacday Magaalada Muqdisho, oo uu soo qaban qaabiyay Golaha Bulshada Banaadir, taas oo lagu cambaareynayay af-gambigii 27 December.
Kulankii xalay wuxuu mar kale, muujiyay gebi-dhaclenta Shariif iyo Kheyre, iyo in aysan lahayn mowqif iyo mabda’ siyaasadeed, oo degaaka ku wajahan, waxayna intii lagu guda jiray bishaan dhamaadka ah hor istaageen dhowr qorshe oo la doonayay in Madaxtooyada loga saaro Farmaajo.
Kulankaas, waxaa ka soo muuqday xubno ka tirsan G. M. Musharixiinta, sida Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud, Cabdikariin Xusen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Kheyre, waxa ay dhawaan dadaal xooggan ku bixiyeen, sidii ay hor istaagi lahaayeen abaabulka Badbaado Qaran, waxayna kala jabiyeen ciidankii caasimadda Soo galay Isniintii.
Waxa ay noqdeen siyaasiyiintii ugu horreysay ee la kulama Qoorqoor, wax ka yar hal saac, kadib markii uu Talaadadii Muqdisho u yimid inuu kala furfuro, bulshada reer Muqdisho oo si weyn u garab istaagtay Maxamed Xuseen Rooble.
Waxa ay hore u diideen in ay ka qeyb galaan kulan ay xubno ka tirsan Midowga Musharixiinta la yeesheen RW Rooble, kaas oo looga hadlayay xaaladda dalka gaar ahaan halka salka loo dhigayo xiisadda aloosan.
Dadka Muqdisho ee siyaasadda u dhuun-duleela ayaa si weyn u hadal haya hab-dhaqanka siyaasiyiintaan kuwaas oo la xasuusto in ay hore u diideen dhismaha Gole Qaran oo ka shaqeeya maslaxadda Galmudug, Hirshabeelle iyo Gobolka Banaadir.
Kheyre, waa shaqsiga waqtiga ugu badan la soo shaqeeyay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, waxaana la rumeysan yahay in aysan jirin kala aragti duwanaasho buuran oo u dhaxeysa isaga iyo Kooxda Qatar taageerto ee Madaxtooyada sharci-darrada ku joogta.
Halka, Shariif, oo billowgii iyo bartamihii sanadkaan kulamo kala duwan la qaatay Fahad Yaasiin, uu rumeysan yahay inuu garab ka heli doono wakiilka Qatar u qaabilsan arrimaha gudaha haddii Farmaajo fashilmo.